Canonical inova nhengo yeGnome Foundation Council | Linux Vakapindwa muropa
Mavhiki mashoma apfuura Canonical uye Ubuntu yakaburitsa yekutanga yakagadzikana vhezheni yeUbuntu neGnome 3. Yekutanga vhezheni munguva yakareba yekushandisa Gnome sedhiraivhodhi hombe. Iyo inotevera kusimudzira ichave zvakare neGnome sedhiraivhi hombe uye ichave iri yekutanga LTS vhezheni kuratidza Gnome sedhiraivhodhi hombe.
Zvinhu zviviri izvo zvinongoratidzira chete kutsigirwa kweCanonical yeGnome asiwo kugadzira vashandisi vazhinji vanogona kuve nechavo chavanogovaniswa vasina kuita shanduko. Uye zvinoita sekunge izvi zvichave zvakadaro kwenguva yakareba.
Canonical yakasimbisa kupinda kwayo muGnome Foundation Advisory Board, rinokosha rinodzora reGnome Foundation iro risingangosimbise rutsigiro rweCanonical yedesktop asi chinangwa chekubatsira mukuvandudza zvirongwa zvaro uye pamwe nekuzviunza kune mamwe mapuratifomu akadai seIoT.
Canonical ichabatana neGnome Foundation kusimudzira Gnome
MuAdvisory Council yeGnome Foundation makambani akakosha akadai seGnome, RedHat, FSF kana Linux Foundation, chimwe chinhu chisina kuwira panzeve matsi, nekuti Gnome ndeimwe yemasimba kwazvo uye akazara desktops eLinux aripo parizvino.
Chinangwa cheCanonical pamwe nekubatana uku ndechekubatsira mukusimudzirwa kweGnome uye nesoftware yayo yese, kuivandudza uye kuita kuti ive inobatsira uye inoshanda kana zvichikwanisika. A) Hongu, Zvinotaridza kuti Ubuntu ichave imwezve inopa kune iyo Gnome desktop kwete pane iri nyore desktop desktop. Kunyangwe kutora chikamu muGnome Foundation kunogona kunge kuri nekuda kwechinangwa cheCanonical chekuenda kuruzhinji nekuwana mari yekudyara. Panyaya iyi, chinangwa cheCanonical chingave chekukwezva mari zhinji nekuda kwekubata mumasisitendi emureza mukati meGnu / Linux nyika.
Chero zvazvingaitika, zvingave nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe, mushandisi wekupedzisira ndiye achave anokunda zvese izvi, nekuti ivo vachazoona kuti desktop yavo yeLinux inowana sei mamwe mashandiro, zvinobatsira uye nekushandisa kwakaderera zviwanikwa. Zvisinei Ko Gnome inozopedzisira yaita kunge Kubatana? Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Canonical inova chikamu cheBhodi yeGnome Foundation
Ngirozi J Mota M akadaro
Gnome iri kutotaridza senge Kubatana mune iyi yekutanga vhezheni.
Pindura kuna Angel J Mota M